Indlu ye-cocooning ezimeleyo "Au pti Poudain"
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguPascal
UPascal ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
I-93% yeendwendwe zakutshanje inike uPascal iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ilungele ukuba seluxolweni kunye nokutshaja iibhetri zakho! Kwintliziyo ye-Auvergne, emazantsi e-Cézallier 40 m2 indlu kwi-hamlet yokwenyani. Ihombise iNdalo ecocekileyo, i-sofa eguqukayo ekumgangatho ophantsi, igumbi lokuhlala / ikhitshi elifakiweyo. Umgangatho wokulala oyi-1, igumbi lokuhlambela kunye ne-WC. Igadi yentendelezo yabucala eneendawo zokutyela kunye ne-pergola.
Kufuphi: I-Auvergne Animal Park, ukukhwela intaba okanye ukukhwela ibhayisekile entabeni. Iidolophana ezintle kakhulu eFransi (iBlesle, iMontpeyroux, i-Usson ...), Iindawo zendalo (intlambo yabangcwele baseBoudes, i-Godivellle kunye namachibi ayo ama-2)
5 'ngemoto evela kuzo zonke iivenkile - ichibi lokuqubha.
Kwi-15 'hypermarket kunye ne-A75 kunye ne-20' Issoire.
Isixeko esiphakathi saseBesse kunye neLake Pavin, iinqaba zaseMurol kunye neLake Chambon ...
Ngesicelo kunokwenzeka ukongeza ibhedi enye kwigumbi lokulala.
Ekhitshini uya kufumana iimveliso ezisisiseko ezifana nekhofi, iti, i-rusks, njl. kwiintsuku zokuqala.
Kwakhona kunokwenzeka uku-odola ukuba ube nebhaskithi yemifuno entsha "ephilayo" evela kubavelisi bendawo.
Indlu ifanelekile kubathandi bendalo kunye nokunyaniseka. Ubuyiselwe ngentlonipho yokusingqongileyo, uya kufumana ukulula, ubumnandi bobomi kwelona xesha loxolo ...
indawo: iAuvergne encinci yaseScotland ...
Abanye bathi ukuba Cézallier Kubonakala ngathi eSkotlani okanye kumathafa Mongolia ... Halfway phakathi Sancy massif kwi North, i Cantal kwiiNtaba kwi South yaye intliziyo Auvergne mlilo Regional Natural Park, Nanku kumhlaba kufuphi zezulu, leyo akushiyi mntu ungakhathaliyo! Ungaphoswa yiCézallier ukuba uthanda i-expanses enkulu kunye nomhlaba kude nengxolo kunye nobushushu!
Unayo yonke indlu enomnyango ozimeleyo, igadi yayo yentendelezo kunye ne-pergola yayo.
Xa ufika Josiane, umfazi wam uya kukwamkela kwaye akunike zonke iingcebiso ozifunayo ngendawo, ngokusingqongileyo, ukuba ubone ntoni kwaye wenze ntoni.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ardes